Mandrosoa indray! | Martech Zone
Alahady, Novambra 26, 2006 Zoma, Oktobra 24, 2014 Douglas Karr
Ny lohahevitra ol dia nanomboka nankaleo ahy kely, noho izany dia nanapa-kevitra ny hitandrina amin'ny rivotra aho ary hanopy ny tranokala. Nanomboka tamin'ny Squible Lohahevitra beta ary navoakany tanteraka. Nampiako ny bara Google Video aza, manao fikarohana ny kisary kisarisary kisendrasendra avy amin'ny Google Video izy. Ho hitanao ao ireo tiako indrindra - Seth Godin sy Tom Peters, ary koa ireo tag hafa ankapobeny amin'ny tranonkala 2.0, fanatsarana motera fikarohana, marketing amin'ny Internet, sns.
Tiako ity lohahevitra ity satria manao ny laharam-pahamehana ilay pejy. Raha tokony ho ny sidebaran'ny menio (izay tsy nisy tena nampiasa), ity lohahevitra ity kosa dia manjary ambany be amin'ny pejy fandraisana. Ary koa, raha nisy mpitsidika tonga teto ary rehefa avy namaky ilay lahatsoratra hoe 'fohy' nefa tsy liana izy ireo… dia manana ny lahatsoratra 'mifandraika' aho. Angamba misy lahatsoratra iray ao izay tian'izy ireo vakiana.
Nanao tweaks kely mahafinaritra ho an'ny lohahevitra ihany koa aho. Squible dia sakan'ny napetraka, noho izany dia nanova ny fomba rehetra amin'ny sakany miovaova aho. Squible koa dia mametra ireo tarehintsoratra eo amin'ny pejy eo aloha (raha tianao) fa manapaka ny atiny amin'ny teny afovoany raha izany no fetra. Nanova ny fiasa aho mba hanapaka azy amin'ny toerana farany alohan'ny fetra.
Ary mazava ho azy, misy ny sary mirehitra! Te hanana fientanentanana kely kokoa aho avy eo ny manga mangatsiaka amin'ny lohahevitra nataoko teo aloha. Ho hitantsika eo izay mitranga. Somary manahy aho fa ity aja ity dia mampiasa ajax kely kokoa, manome votoaty an-dalambe. Ho hitantsika eo ny valin'ny fikarohana nataoko tamin'ny tranokala vaovao. Antenaina fa ny tagging rehetra misy ifandraisany lalina dia hiteraka SEO tsara kokoa (Search Engine Optimization).
Mbola ho avy ny hafa! Fa manantena aho fa tianao izany!
Tags: bilaogydouglas karramin'ny fitaomana sy ny mandeha ho azyfanombohana tranonkala
Ny Fahasambarako Fahasambarako
26 Nov 2006 tamin'ny 10:12 PM
Jery ​​vaovao! Ny lohan'ny voasary dia manome fahatsapana maraina, mahafinaritra be.
27 Nov 2006 tamin'ny 9:35 PM
Oay! Fanatsarana tokoa, hoy aho. Madio sy tsotra. Tsy misy doka?
28 Nov 2006 amin'ny 10:15 maraina
Loko mahafinaritra - tena mazoto be. Saingy tokony hiaiky aho fa malahelo an'i Douglas kely eo an-tampon'ilay pejy aho - nanohina manokana izany.